Smart Lock တပ်ဆင်ခြင်း - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
Smart Lock တပ်ဆင်ခြင်း။
1. စမတ်သော့ခလောက်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
1. ကျောင်းသို့သွားသည့် ကလေးများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
ကလေးဘေးကင်းရေးသည် ကြီးမားသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ကလေးငယ်များ ပျောက်ဆုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဓိကအားဖြင့် ကလေးသူငယ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နယ်ပယ်တွင် စမတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ထုတ်ကုန်များ အများအပြား ရှိနေပြီး ကလေးများ၏ စမတ်နာရီများ၊ ကလေးများအတွက် စမတ်ကျသော ရှူးဖိနပ်များ၊ ကလေးများ၏ စမတ်ပုံပြင်စက်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဟိစမတ်သော့ခတ်ကလေးသည် အချိန်မီ အိမ်ပြန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် ကလေး၏ အဝင်အထွက် မှတ်တမ်းများ အရ ကလေး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘေးကင်းခြင်း ရှိ၊ ဤသည်မှာ လက်ဗွေစကားဝှက်သော့ခတ်ခြင်း၏ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စမတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ထုတ်ကုန်များကို မဝယ်ဘဲ ကလေးများအား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို မိဘများ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သည်။
2. သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အလုပ်များကို စီမံခန့်ခွဲ ကြီးကြပ်ပါ။
မင်းမှာရှိတယ်။စမတ်သော့ခတ်. စမတ်လော့ခ်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့စဉ် အိမ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တွန်းပို့သည်။ လည်ပတ်မှုမှတ်တမ်းများကို အချိန်မရွေး စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အလုပ်နှင့်ကျန်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများကို သင်နားလည်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အပြင်ထွက်ခြင်းရှိ၊မရှိကို သင်နားလည်နိုင်သည်။ ဤအခြေခံဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို အကြမ်းဖျင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် မတော်တဆဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သည်။
3. မိသားစုဘေးကင်းရေးစင်တာအနေဖြင့်၊ အခြားဘေးကင်းရေးဖြစ်ရပ်များ မဖြစ်ပွားစေရန် တားဆီးပါ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လူတို့၏ ဖျော်ဖြေရေး လိုအပ်ချက်ကြောင့် စမတ်တီဗီများကို ဧည့်ခန်း၏ အနှစ်သက်ဆုံး အသစ်ဖြစ်လာစေကာ အခြေခံ ဘေးကင်းရေး အတွက် လူတို့၏ လိုအပ်ချက်သည်လည်း ကြီးမားသော စျေးကွက်နေရာကို မွေးဖွားပေးနိုင်သည်။ စမတ်အိမ်များ၏ ဘေးကင်းသော ဂေဟစနစ်ကွင်းဆက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။စမတ်သော့ခလောက်များဝင်ပေါက်အဖြစ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မျိုးဆက်သစ်စမတ်သော့ခလောက်များတွင် အာရုံခံကိရိယာများ ထပ်ထည့်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းအပူချိန် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လေထဲတွင် အချို့သောဓာတ်ငွေ့များသည် စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ မီးနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှု မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူ၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် အဝေးမှ အချက်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ စမတ်သော့ခလောက်များ အပလီကေးရှင်းသည် ပို၍ရေပန်းစားလာလိမ့်မည်။ လက်ဗွေရာသော့ခတ်မှုသည် နည်းပညာမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော်လည်း လက်ဗွေသော့ခတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။
4. စမတ်သော့ခလောက်တွင် တံခါးဖွင့်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးပါရှိသောကြောင့် အသုံးပြုရအလွန်ပျော့ပြောင်းပါသည်။
စမတ်လက်ဗွေသော့ခလောက်များ ပေါ်ထွက်ခြင်းသည် လူများကို ပိုမိုလုံခြုံစေသည်ဟု ခံစားရစေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ဗွေရာ လော့ခ်က လူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုသာမက စိတ်အေးချမ်းမှု တစ်မျိုးကိုပါ ယူဆောင်လာလို့ပါပဲ။ လက်ဗွေဖွင့်ခြင်း၊ စကားဝှက်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ကတ်ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့် စက်ခလုတ်ဖွင့်ခြင်းကဲ့သို့သော လော့ခ်ဖွင့်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
စကားဝှက်များ အခိုးခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မည်သူမဆို လျင်မြန်စွာ၊ လျင်မြန်စွာ၊ လုံခြုံစွာ၊ အဆင်ပြေပြီး ထိထိရောက်ရောက် စတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စကားဝှက်အတုများကို တံခါးမဖွင့်မီနှင့် စကားဝှက်များဖွင့်ပြီးနောက် အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ စနစ်သည် မှန်ကန်သော စကားဝှက်စမတ်သော့ခ်ထုတ်ကုန်များကို အလိုအလျောက်ထုတ်ယူကာ မမျှော်လင့်ဘဲ စျေးကွက်ထဲသို့ လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
5. Smart သော့တပ်ဆင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု
(၁) လက်စွဲစာအုပ်ကို စစ်ဆေးပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးကို စစ်ဆေးပါ။စမတ်သော့ခတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ၊ လမ်းညွှန်အပိုင်းများ၊ လော့ခ်ကိုယ်ထည်၊ ဝက်အူများ စသည်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။
(၂) သင့်ကိုယ်ပိုင် တံခါးကို သော့ဖွင့်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ စမတ်လော့ခ်၏ လက်ကိုင်နှင့် ကျည်ကို ချိန်ညှိပါ။
(၃) လော့ခ်ကိုယ်ထည်လမ်းညွှန်အပိုင်းသည် တံခါး၏ အလင်းဝင်ပေါက်အရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ မကိုက်ညီပါက၊ လမ်းညွှန်အပိုင်းကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
6. မတပ်ဆင်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများစမတ်သော့ခတ်,
(၁) လော့ခ်ကိုယ်ထည်ကို အဖွင့်အပေါက်တွင် တပ်ဆင်နိုင်မလား။
(၂) အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်အကန့်များ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။စမတ်သော့ခတ်တံခါးပေါ်ရှိ အပေါက်များကို လုံး၀ ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ဖုံးအုပ်၍မရပါက တပ်ဆင်၍မရပါ။
(၃) အနောက်ဘောင်နှင့် တံခါးကြား အကွာအဝေးရှိရမည်၊ မဟုတ်ပါက တံခါး၏ အဖွင့်နှင့် အပိတ်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
Home Electronic Electric Tuya App Wifi Smart Lock ၏လုပ်ဆောင်ချက်
Fingerprint Lock နှင့် သာမန်လော့ခ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။